Kooxda LA Galaxy oo Safkeeda ka saartay Daafacii hore ee Arsenal iyo Chelsea Ashley Cole – Gool FM
Kooxda LA Galaxy oo Safkeeda ka saartay Daafacii hore ee Arsenal iyo Chelsea Ashley Cole
( MLS ) 27 Nof 2018. Daaficii hore ee dambeedka bidix xulka England Ashley Cole ayaa laga saaray liista kooxda LA Galaxy kaddib markii uu dhacay heshiisa kooxda horyaalka mareykanka ee Major League Soccer.
Naadiga ayaa go’aansatay inaan wax heshiisa laga saxiixin Cole oo 37-jira, iyo todoba cayaariyahan kale.
Daaficii hore ee kooxaha Arsenal iyo Chelsea ayaa ku biiray LA Galaxy sanadkii 2016 isagoo kabtanka kooxdaa loo magacaabay bishii March, kaddib laba bil markii uu kor dhiyay sanad qandaraaskiisaa.
Cole ayaa dhaliyay seddax gool 86-kulan uu u saftay kooxda reer Mareykan.
Weeraryahanka Striker Zlatan Ibrahimovic ahaa kamida 16-ka cayaariyahan ee u magacaaban kooxda LA Galaxy safkeeda kal cayaareedkan bilaaban doona ee horyaalka MLS 2019, kasoo lagu jadwaleeyay inuu bilaawdo bisha May 2019.
Ashley Cole ayaa kamid ahaa daafacyadii dambeedka bidix ka cayaara kuwii ugu wanaagsana Premier League wuxuuna horyaalka England qaaday seddax kol waqtigii kooxaha Asrenal iyo Chelsea isagoo sido kale Champions League iyo Europe League la hantay naadiga Blues.
Jose Mourinho oo Wacad ku Maray inuu u LUGEYN doono Old Trafford Haddii markale ay Dhacdo...?
“Ma Jecli guul darada, mana ka dhargayo ku guuleysiga koobab” _ Lionel Messi